အဆိုပါဥပဒေ: sexting sexy ပုံရိပ်တွေပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ sexting
လူငယ်များဟူသောဝေါဟာရကို '' sexting '' မသုံးစွဲဖို့လေ့, ပိုပညာရှင်တွေသို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်းသမားများကအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါဟာအီလက်ထရောနစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နည်းပညာသာမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ပင်ကိုဗီဒီယို post မှအရာအပေါ်လူမှုမီဒီယာ apps များအမျိုးမျိုးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သောစမတ်ဖုန်း၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းမှကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခွင့်ပြုထားတဲ့ကင်မရာတွေမပါဘဲမိုဘိုင်းဖုန်းများအနေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်အဖြစ်အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
eNASCO အားဖြင့်ပြန်တမ်းစက်တင်ဘာလ 2015 ထံမှတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ, ကလေးသူငယ်ဘေးကင်းရေးအှနျလိုငျးများအတွက်ဥရောပအန်ဂျီအိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ '' ဟုခေါ်တွင်လူငယ်အွန်လိုင်းကြားတွင်လိင်အခွင့်အရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ"sexting အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနသုံးသပ်ချက်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာအောက်ပါပြသထားတယ်:
1 ။ မိန်းကလေးများသူတို့အားပုံတွေကိုရည်ရွယ်လက်ခံရရှိသူထက်ကျော်လွန် shared ကြသောအခါ '' sexting 'နှင့်အများကြီးခိုင်ခံ့စီရငျခကျြကိုပေးပို့ဖို့အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ဖိအားရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
2 ။ အခြားသူများကိုပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းသတင်းပို့စဉ်တချို့ကလေ့လာမှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများမျှဝေလူငယ်များ၏အလွန်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းသတင်းပို့နှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေမြိုးမြိုးအဓိပ္ပာယ်အသုံးပြုသောပြီ ခြုံငုံကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမျှဝေမည်မျှလူငယ်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ အဟောင်းတွေလူငယ်များနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသို့မဟုတ်အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေနဲ့အတူသူတို့အား '' sexting 'ဖို့ကပိုများပါတယ်, ဒါပေမယ့်' sexting 'အဘယ်သူသည်အသက်အပိုင်းအခြားနှင့်လူငယ်များ၏အခြားဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်နေပါသည်။
4 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်နှင့် privacy နှင့်ကလေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှလူငယ်အခွင့်အရေးများအကြားစာပေအတွက်တင်းမာမှုရှိပါသည်။ လူငယ်များသူတို့သင်ကြားနေပါတယ်ဘာသဘောတူညီချက်စဉ်းစားခြင်း, '' sexting 'နှင့်မျှဝေပုံရိပ်တွေစပ်လျဉ်းသဘောတူညီခကျြသူတို့ရဲ့နားလည်မှုမည်သို့ရှင်းလင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်
<< အလေ့အကျင့်အတွက်သဘောတူညီမှုကဘာလဲ? စကော့တလန်၏ဥပဒေအရ Sexting >>